Maamulka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed oo ka qeyb galay kulan lacag logu wareejinayay shirkadda dhismaha kulmiye. - Somali Chamber of Commerce and Industry
Home » News » Maamulka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed oo ka qeyb galay kulan lacag logu wareejinayay shirkadda dhismaha kulmiye.
Maamulka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed oo ka qeyb galay kulan lacag logu wareejinayay shirkadda dhismaha kulmiye.
Maamulka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed iyo kan Gobolka Banaadir ayaa ka wada kheyb galay munaasabad logu wareejinayay lacag shirkadda dhismaha kulmiye oo logu tala galay mashruc lagu kabayay dhismah wadda xarisa dagmoyinka Wadajir iyo Dharkeenley.
Munaasabada lacag wareejinta ah waxaa goob joog ka ahaa Maamulka Rugta Ganacsiga, maamulka Gobolka Banaadir oo uu hogaaminaayo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish), iyo mamuladda labad dagmo, iyo masuuliyn kasoctay Shirkadda dhismaha kulmiye.
Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga mudane Maxamud Cabdi Cali (Gabeyre) oo gobta kahadlay ayaa sheegay “Waa dagmoyinkii noogu horeyay intii aan wax kabeynay takuleynta, hormarinta good ahaan wadanka gar ahaan Gobolka Banaadir, runtii arinkasi waxa uu inagalinayaa dhiri galin xoogle waana uga mahad celiheyna labada dagmo, inay dagmoyinka kalane ay kuday daane waan rajeey heena”.
Dhanka kale Guddoomiyaha Gobolka Banaadir (Cumar Filish), oo munaasabaadda kahadlay ayaa bogaadiyay bulshadda kunol dagmoyinka Wadajir iyo Dharkeenley, talabadda ay qaaden, asago raaciyay in xariga laga jari doono marka uu lamigu ex gaaro lana xusi doono cid waliba iyo doorka ay kulaheed howsha dhismaha.